Sabrina Swimsuit PDF Sewing romance – The Tailoress
musha / Women / Sabrina Swimsuit PDF Sewing romance
The Sabrina Swimsuit PDF Sewing romance chinhu classy rakazaruka wakakombama swimsuit kuti anotsvaka kukuru kwakaitwa siyana Ruvara Nemicheka hwakarongwa. Muzinda mberi chisungo anounganidza bhikini pamusoro uye ukama sezvinoita risingadi kudzorwa-mutsipa. The swimsuit inoratidza maviri zvokutsigira noushamwari kumberi uye kumashure netai kuti kunonyanyisa nyaradzo.
swimsuit Izvi zvizere reversible sezvo vazvo vose vari yakavanzwa, saka kumutorera uye sarudza dzimwe Micheka zvikuru swimsuit yako itsva mbiri mune imwe!
Please kuona Sabrina SWIMSUIT Tutorial pano kana baya Tab pazasi kuti kurivhura ari papeji ino.
Copyshop saizi: 136masendimita X 45cm / A4 Pages: 15 / US Letter: 18
Cheka zvidimbu zvose. Vateye vaviri pamberi zvidimbu KODZERO kumativi pamwechete. Kuisa GUSSET chidimbu pamusoro uye mumutsetse. Ndingomubayirira pasi kwakavharwa nenyama kuti gumbo uye angled divi musono Kushivirira sezvinoratidzwa nomufananidzo. Musono uchishandisa Zig-zag Musono. Vachekerere musono mugove pedyo kwakavharwa nenyama.
Vateye maviri BACK zvidimbu KODZERO panhivi pamwe. Ndingomubayirira pasi kwakavharwa nenyama kuti musana munyonga uye gumbo musono dzichashivirira.
Musono uye kudimburira sakare.
Kusika Front kusungira muzvishwe kuti pamberi swimsuit kuburikidza stitching kukwira kureba nerimwe chidimbu uye Kurudyi mativi kunze. Akatema hafu.
Izvi zvichakurukurwa wakapetwa hafu, kuvanda pakati musono uye akaisa pakati musono kushivirira Front of swimsuit panguva Tie zvishwe Kuisa Point.
Dzokorora musana netayi zvishwe.
Itai ushamwari nokutevera netayi & Sungai Tutorial.
Vateye vaviri bhikini zvidimbu KODZERO kumativi pamwechete. Dzinoisa mashoko akapeta Front kusungira zvishwe muimba musono mugove, mbishi kumicheto kuratidza.
Dzinoisa Back kusungira muzvishwe kuti pakati shure musono dzichashivirira.
Pin kwakavharwa nenyama pamwe rokumusoro musono kwomugove bhikini kubva pakati kudzokera centre shure. Musono tai zvishwe uye kwakavharwa nenyama panzvimbo.
Musono rezasi musono mugove kusvikira museve chiratidzo nomufananidzo chidimbu.
Trim musono dzichashivirira (kunze unstitched chikamu rezasi musono mugove).
With nechemberi NGOZI mativi panze uye BACK KODZERO mativi panze, dzinoisa Back mu-pakati mberi akaturikidzana, zvokuti KODZERO kumativi dziri pamusoro mberi neshure zvidimbu.
Swatanudza kurutivi vazvo. Hoko Musono.
Nanganisa crotch musono mugove mumwe rukoko nechemberi yayo enzanirana rukoko of BACK.
Adzorere swimsuit KODZERO mativi kunze kuburikidza rakavhurika crotch musono.
Dzokerai pamusoro pamberi musono kwomugove yasara rakavhurika crotch musono uye hoko padenga BACK crotch musono mugove. Musono kushandisa tsono ballpoint uye zii Musono.
Match rimwe yepazasi musono Kushivirira of bhikini pamwe unoenderana rokumusoro musono kwomugove huru swimsuit.
Hoko Musono kusvikira zvezvinangwa kuratidzwa pamusoro nomufananidzo zvidimbu.
Swatanudza vasara rokumusoro mbishi pamucheto swimsuit pamwe bhikini.
Peta pasi musono kwomugove yasara yokumusoro swimsuit musono mugove uye kuvanza musono kwomugove bhikini uye kare vaisona swimsuit musono ngaabvumire pakati pavo.
Panguva apo swimsuit inoita bhikini pfungwa, ari musono kwomugove bhikini zvichabviswa ruoko zvinyoronyoro kuti peta pasi (zvinonzi wakapetwa kusvikira sangana pfungwa, asi anofanira peta pasi rakapinzwa huru swimsuit).
Pin panzvimbo, ipapo pamusoro-Musono uchishandisa Zig-zag Musono mhiri zvizere pakureba rezasi bhikini. Panguva padzinosangana pfungwa iri bhikini uye chikuru swimsuit, munyonga pamusoro-stitching pasi huru swimsuit ozodzokera zvakare kuti kupedza.
Ndapota kureva mufananidzo kuona munyonga ari pamusoro-stitching.
Dzinoisa ushamwari sezviri kuratidzwa.
The Front tai achaita sunga vakapoteredza curved buri pakati bhikini.
Kopa Sabrina Swimsuit PDF Sewing romance pano